Wuxuu yiri "ku daayaa" Maxaa daaray buu yiri? Wuxu yiri "Dabbaalkii, Lafihi Daabbad qaarkood sow duleedka kama helin, Duf ku bexe wedkiisii Doqonniimo gurayaa, nacasnimo daldalayaa dabadeeto eedyaa". Wuxuu yiri dul-badanihi, "doonnidii la raran jirey ma nafbaa ka daydeen, mise wuu dibboodoo dugaag cayra baa helay? Kuye "daayinkiisii, Dembi dhaaf ha siiyee sawti duugti loo qalay, Ducadii adoogeen" Wuxuu yidhi "duqeennii, Degta inagu sidi jirey isaguna ma dubuq yidhi?
W Salka dhiga guryaa seexda. Gabayada Abwaan Hadraawi Rabow duumadaadiyo inta cuduro duushee Docwareenka feedhaha, sambadada dalooshiyo Dacuun hanugu ridin. Bulxan goobo dirireed, Afar-geeslihiisii, Geyigoo dhan saamee, Af-Qallooc gargara-baxa, Iyo geeddi-nololeed, Hadba gaawe saameel, Gaashaan nin sidan jiray, Iyo hibada geesiga, Gabayguna u fududaa, Faraskana la golongolay, Ruuxii gartow sheeg?
Laamaha xorriyaddiyo Xayn-daabka calankee Xejinaaya dhalashada Xididkay ka beermaan Xinjir laga waraabshaay. Gudub magacu waa hore Galbay oo la wada maqal Dunidoo dhan wada gaadh Gabdhihiina loo sheeg Iyadaan god gabbayada deyn Gibishay I saareen Geestee u duubaa?
Hadduu marba qayb la ooyo, Heedhee Sahraay heedhe Marka haaddu socod deyso Dhirta sare tukuu fuulo Gorayadu sanqadha reebto Adna soonka xidho maaha Mugdi talada sii maaha Berri iyo siday doonto Sug cadceedda maqan maaha Saqda dhexe habeen soocan Gudcur simay adduunkeenna Wax siraata noqo weeye Heedhee Sahraay heedhe Saran seerka jiilaalka Surbacaadka jaahweynta Sumal-haadka roob waaga Iyo solanka daaduunka Cirka oo sabaad guurey Dhulka oo huwadey siigo Iyo dogobbo soogsoogan Haxraawi beladu sooyaanto Saadaashu beenowdo Saca nuguli kaa leexdo Adna sebenka raac maaha Inan sabadu duugoobin Sayax iyo ugbaad waayin Sudda iyo degaankaagu Surmi iyo hadrawi leeyan Ama saacu guur-guurin Sohda ceelku dheeraannin Adaa yeeli kara saasba.
Gabaayda goolli-baadhkii, Iyo laba-garlayntii, Faras buu u gedo-baray. Boggan waa la kaydiyay, waxba laguma qoro. Bal daawada uummigiisa; Hadda salamadhlow gaabi Ha ku jabin saqlaa waalan Sallow ololka hoy jooji Ha saloolan xayndaabka Ha hadaawi bixin saloognaanta Ha sarriiran waayeelka Sakatiga ka daa beesha Saha iyo af kala qaadka Ha ka nixin hiddaa suubban. Abuurtiyo heega daawo, 5. Dijaal korayaa qaarsoon Ammaaniyo qawl lahayn, Asoolka hablaa ka daaya!
Marka xiga Samaw heedhe Talo sibiq dhaqaaqeeda Soof-daran habawgeeda Sal-fudaydka hooggiisa Bal sallaankan fuul laalan Iyo sagabtan heensaysan Dhulka saas u jeedaali Sidan iyo sidaas fiiri Sidan iyo gadaal dheeho. Urugiyo xusuus baa Asaraarka faallada Saqda dhexe abuuree Umal iyo ladh soo kaca Wakhtiyada inkaarta ah Maxaa lagu illoobaa? Shilna wayna daan-weyn Demmanaanta kama foga Xoolaha dayacanta ah Inuu daayo mooyee Kam durugsanaan karo Doon-doonisteediyo Day-dayashadeeduna Darayada libaaxiyo Ninka damalka ka hadhsaday Deleb waw gudboon tahay Haddaan waayey doobkii Xilka doonnantiisa ah Dayrada u noqon gabatada Danyar habaqlaheeddii Duddo habalku kala tago Miyaan waayey deelkiyo Daba socodka qaylada Hayin sida dadweynaha Dalaggiyo dhaqaalaha Duuggiyo wixii nool Haddii layska dabo galo Hadduu aar dalaafiyo Arko belo hardaawi soo diran Nafta dawdab roorka ah Daran doorri orodkiyo Durdurada ka buuxsado Maatada derderan iyo Deli iyo jar kala dhaco Dooggaan la maarayn Dibna looga soo kaban Didmadiisu keentee Haddaan waayey dabarkii Dhacdo lagu daweeyoo Lagu dagagaraa jirin Miyaan waayey doohdiyo Doobirtii la odhan jirey?
Mareegta raadraaca taariikhda,hidaha iyo dhaqanka Dayaxa School Education Website. Dardartii aftahankiyo Dilladii farshaxankiyo Hadraaiw abwaan ma sidatoo Diiftii saboolkiyo Daal baa ka muuqdee Gabaygaba ma ducashiyo Dawersaa ku keentaan?
Isaguna ka geyn waa inuu dhiilka gororsado gacantana ma dari karo. Hub maxaad ka sidataa? Hadh qabow ma jiiftaa? Madaddaala beenlow Muhashada ku haysiyo Macal saad u baratiyo Macaluusha kuu taal Waxay muujinaysaa Sida aynu Moogow Hadrawai maan u kala-nahay. Rabbow dalandoolka dhow Gabre iyo madheedh iyo Ma galool mudhaan ahay?
Islaan iyo foox karaarsan, Ma dagaal uganoo Laysu eeba gurtaa!? Ma ammaan gayaxan baa? Nin aqoonta soorkeeda Sida kale u rogey baa leh Ninka sulubka maadhiinka Ugu roon saboolkaa leh Nin samaa ku adag baa leh Sannadkaynu caydhowney Kaynu suus ka weynaa leh Naftu waa sir xeel dheere Nimaan suubin Karin baa leh Wedka qudha sameeyaa leh.
Daawo abwaan Maxamed Warsame Hadraawi Gabdhayahow sidee waaye Ilbaxnimadu saas maaha Hadba suf karkaro maaha Sararaha bannee maaha Qorqor suunniyaa maaha Dhabanada sibbaaq maaha Sanka oo la mudo maaha Sakhrad iyo xashiish maaha Sawir iyo riyaaq gabaysda Filin iyo sarcaad maaha Saxan reer galbeed maaha Kabo sookal dheer maaha Suuriyo durduro maaha Salsalaw cid kale maaha Qof silloon ku dayo maaha Wax sawaaban noqo maaha Sinta iyo lafaa duudka Saddex goor jejebi maaha Dhaqankaaga saydh maaha Soomaali diid maaha Sidaad doonto yeel maaha Dhulka oon ku sidi waayin Samadoo la koro maaha Xilliyada wax saareenka Iyo gabahada reebban Sabbadiyo rugtay joogtey Gabadh timi ma saalloona Ku salliya Rasuulkiina C.
Waxaan ugu hamranayaa Hooyaa ka dhalatoo Naaskii habreed baa Iga hadraaai Wallee hawlahaan galo Iyo heegantaan dhigo Dumar lama haweysteen Ragba ma hungureeyeen Hanti lagama dhiibeen Guri laguma hoysteen Hadal lalama yeesheen! Selelkaba hurdaa keenta Haba seexan goor baas leh Han sareedo loo waayey Gabaayada saraayo loo daayo Sida aan u idhi weeye Gabayaea saacaddeed joogta Sabti nabada haw riixin.
Rabbow dunidaada weyn Ninka Hirarka dhaadheer, Dadka kala hadlaayee Qof kastaba la haystee, ugu taga halkiisow kolley waan hubaayoo, Haasaawahaygiyo waxa aad had iyo jeer, la haloosiyeysaa Gabahada gaara weeyee Hiddo maxaad ku dhaqantaa, Hanti maxaad ka leedahay? In qaawan, intii sawaaban, Markii araggaa la waayay, Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Hadaawi Gunnimayna haysee, Miyaynaan gob noqon karin? Cidina kuu ooyi mayso,.
Hordhac[ Wax ka bedel wax ka bedel xogta ] Aduunka suugaanta daabacan, gaar ahaan maansada; Carab ayaa leh suugaanta ugu fac wayn aduunka iyada oo noocyo badan oo kala duwan ay jirto suugaanta Carbeed. Waxyaabaha kale ee dhaqanka Soomaalida lagu yaqaan waa gaare, bulshada Soomaali waxay ku caan tahay suugaanta iyo sooyaal odhaaheed iyada oo loogu magac daray Qarankii Gabayada. Qarnigii 14aad waayihii uu noolaa ANU Sheekh Cabdiraxmaan Saylici, waayihii dhexe ee Suldaan Diiriye oo ku beegan qarnigii ay noolaayeen aabayaashii Raage Ugaas, Wiilwaal iyo ragii ay isku waqtiga ahaayeen oo haatan laga joogo labo qarni iyo bar ama yadii, ayaa hobolada ku caan baxay suugaanta iyo maansada noocyadeeda kale duwan sida gabay, geeraar oo faraca sare waxaa soo bilowda diiwaanka magacyada la yaqaan hobaladaas ama abwaanadaas caanka ah. Taas waxay noo cadaynaysaa in ugu yaraan 5 qarni mudo ka badan suugaanta Soomaaliyeed ay si hufan u jirtay waagaasna soo gaartay heer aad u sareeya Hooyaalayeey Hooyaalayey Hooye[ Wax ka bedel wax ka bedel xogta ] Habka ku luuqaynta suugaanta maansada, gaar ahaan hooyaalayeey ayaa wuxuu bilowday waayihii abwaanka caanka ah ee Raage Ugaas Warfaa, isuguna noqday qofka habkaas soo caanbixiyay.
W Salka dhiga guryaa seexda. Gabayada Abwaan Hadraawi Rabow duumadaadiyo inta cuduro duushee Docwareenka feedhaha, sambadada dalooshiyo Dacuun hanugu ridin. Bulxan goobo dirireed, Afar-geeslihiisii, Geyigoo dhan saamee, Af-Qallooc gargara-baxa, Iyo geeddi-nololeed, Hadba gaawe saameel, Gaashaan nin sidan jiray, Iyo hibada geesiga, Gabayguna u fududaa, Faraskana la golongolay, Ruuxii gartow sheeg? Laamaha xorriyaddiyo Xayn-daabka calankee Xejinaaya dhalashada Xididkay ka beermaan Xinjir laga waraabshaay.